Mid ka mid ah beelaha dega Sool oo ciidamo ku wareejiyay Puntland (sawiro) – Radio Daljir
Mid ka mid ah beelaha dega Sool oo ciidamo ku wareejiyay Puntland (sawiro)
Juunyo 17, 2018 1:59 g 0
Waxaa maanta soo gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ciidamo badan oo kasoo jeeda mid ka mid ah beelaha gobolka Sool oo ay ugu deeqeen maamulka Puntland, si’ay qayb uga noqdaan soo celinta deegaanada gobolka Sool ee gacanta ugu jira Somaliland.
Wasiirada arimaha gudaha, ammaanka, haweenka iyo wasiir kuxigeenka caafimaadka Puntland ayaa ciidamadan kusoo dhoweeyey deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Ciidamadan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin soo celinta deegaamada ka maqan gacanta dowladda ee ku jira gacanta Somaliland.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ka jiray kacdoono iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo joogitaanka ciidamada Somaliland ee gobolka Sool, waxaana ku dhaawacmay dad badan oo shacabka magaalada ka mid ahaa, maamulka Somaliland ayaa qaaday talaabooyin uu ku xiray boqolaal ruux oo ka mid ah shacabka magaalada.
Ganacsato Somaliyeed oo lagu dilay Dalka Koonfur Africa
Raysal Wasaare Khayre iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo maanta dalka ka ambabaxay (sawiro)